Zon'olombelona · Janoary, 2022 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Janoary, 2022
Jona 2022 13 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Janoary, 2022
COVID-19 : Tsy ho sitrana amin'ny fampiasana fanafody ratsy izany ianao
Azia Atsimo 31 Janoary 2022
Tatitra fiarahamiasa vaovao miezaka manambatra ireo "faktiora tsy hita" avy amin'ny famahana ny COVID-19 tohanan'ny IFI, mandrakitra ireo lesoka maro, ary mametraka fanontaniana manakiana momba ny famahana ny areti-mifindra misy ankehitriny.
Bangladesh : Fifandonan'ny olombelona sy ny elefanta, mety hitondra any amin'ny faharinganan'ny elefanta
Azia Atsimo 30 Janoary 2022
Hatramin'ny Janoary 2020, nisy efa ho telopolo tany ho any ireo elefanta mponina maharitra sy mpivenjivenjy no nisy namono tany amin'ny faritr'i Bangladesh. Tamin'ny Novambra 2021 fotsiny, fito no maty
Karaiba 29 Janoary 2022
Ramatoa King no tandindon'ny 'tsy manana;' ao Jamaika, izay tsy raharahiana ny zo maha-olombelona azy ary matetika tsy voahaja sy araraotina.
Azia Atsinanana 28 Janoary 2022
Takiana ireo atleta, mpanao gazety ary ireo mpanatrika ny Olaimpika Ririnina any Beijing rehetra mba hampiasa ny fampiharana My2022 kanefa mety ho voasintona antenatenan-dalana ny angon-drakitra nomena tamin'ny alalan'ny fampiharana.
Azia Atsinanana 26 Janoary 2022
"Izy no mpanao gazety fahatelo novonoina tao Myanmar tao anatin'ny iray volana latsaka, mariky ny fomba tsy azo ekena mihitsy izay vao maika ampiasain’ny fitondrana miaramila."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Janoary 2022